मिका सिंह ४ बजे सन्नी लियोनीको घर पुगेपछि …. फ्यान ले सोचे गलत ! - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / मिका सिंह ४ बजे सन्नी लियोनीको घर पुगेपछि …. फ्यान ले सोचे गलत !
मिका सिंह ४ बजे सन्नी लियोनीको घर पुगेपछि …. फ्यान ले सोचे गलत !
मिका सिंह, तोशी साबरी र शरीब साबरी सनी लियोन र मजनुको प्रमोशनका लागि शबरीसँग ‘ आँटियाँ डान्स करेंगी ’ को प्रमोशनका लागि कपिल शर्मा शोमा पुगेका थिए” ( सेटमा कपिल शर्मा शो )। यहाँ यी चारजनाले धेरै कुरा गरे र ठट्टा गरे। साथै मिका सिंहले यस क्रममा खुलासा गरेका थिए कि उनी एक पटक बिहान ४ बजे सन्नी लियोनीको घर पुगेका थिए ।
शोमा मिका सिंह भन्छन्, ‘म सन्नीको अमेरिकाको घर गएको छु । ढिलो भएकोले रातको चार बजिसकेको थियो । गलत नबुझ्नु होला साथीहरु। वास्तवमा, मैले सोचें कि म ११:३० पुग्छु। तर प्रदर्शनका कारण ढिलो भएँ । सन्नी लियोनीका पति डेनियलको तारिफ गर्दै मिकाले थपे, ‘सनीका श्रीमान् एकदमै प्यारो छन् । उसले मलाई त्यो रात पिज्जा बनायो र मलाई धेरै स्वादिष्ट कफी पिउन लगायो।
यी सबैको बीचमा मिका सिंहले यो पनि बताउँछन् कि जब उनी अभिनेत्रीसँग वर्ल्ड टुरमा गएका थिए, तब उनले कुनै प्रकारको तानसुट नराखेका थिए । मनोवृत्ति थिएन । समयको कुरा गर्दा उनी पूर्ण रूपमा समयनिष्ठ थिइन्। उनी बिहान सात बजे कार्यक्रममा पुग्थिन् । यसको जवाफमा सन्नीले तुरुन्तै जवाफ दिइन्, ‘यो इन्डस्ट्रीमा समयमै आउने म एक्लो मूर्ख हुँ।’ अनि यो सुनेर सबै चर्को स्वरमा हाँस्न थाल्छन् ।
यसैमा कपिल पनि अभिनेत्रीसँग रमाइलो गर्न थाल्छन् । उनीसँग लामो समयपछि भेट भएको बताइएको छ । जसमा सन्नीले तुरुन्तै जवाफ दिइन्, ‘हो, मलाई थाहा छ, तिमीले मलाई फोन नगर्नु, नमस्ते पनि नभन । केही छैन। तिमीलाई कस्तो छ? के छ?’ त्यसैले कपिल भन्छन्, ‘तिम्रो फोन नम्बर कुर्दै बिहे गरें।’ यो सुनेर सबै हाँस्न थाल्छन् ।